Biko kọwaa ụlọ ọrụ Jargon na Acronyms | Martech Zone
Tuzdee, Machị 16, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
M nnọọ agụ a pịa tọhapụrụ site na ụlọ ọrụ na-ezubere iche ahịa technology folks dị ka onwe m. Na nkwupụta mgbasa ozi ahụ, ha kwuru:
OTT, PaaS ngwọta, IPTV, AirTies ngwakọ OTT, na OTT video ọrụ n'elu ikpo okwu, OTT video ọrụ n'elu ikpo okwu na-eweta, n'elu-n'elu video nnyefe site na-n'elu media management usoro, ngwakọ ngosi nke OTT, dijitalụ video na agbasa ozi (dvb-t) , AirTies Air 7320 ngwakọ setịpụrụ n'elu, IP Multimedia Product Line, igbe ndị a kwadebere na-akwado ihe ngwọta OTT maka SD na HD vidiyo.
Anaghị m eme ihe a. Nke ahụ abụghị ihe niile… ebe a bụ okwu ikpeazụ:
A ọhụrụ nke DVB-T / IP ngwakọ STBs, na Air 7320 na 7334, na Air 7130, a Personal Video ndekọ (PVR) STB na esịtidem Hard Drive na ọhụrụ Air 7100, ọkọlọtọ definition ala na-eri STB.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi, enweghị m ihe ọ bụla ụlọ ọrụ a na-eme. Ọ bụghị ihe ngosi. Ha na-agbasosi ike na ụlọ ọrụ ha na teknụzụ ha nke na ha chere na onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ akụkọ a ga-aghọta ihe ọ bụ na ha mere, rere, ihe ọ bụla…
Ka ị na-ede blọgụ gị, Tweets, pịa mbipụta na ntanetị weebụ, biko kọwaa ụlọ ọrụ jargon ma kọwaa aha gị. Eleghi anya m gaara ekwurịta banyere teknụzụ a na-akụda ala ma m ghọtara ihe ọ bụ. Kama, edere m banyere ịmara ihe ọ bụ n'ezie na ihe kpatara ya ji dị mkpa.
Tags: video vidiyohdtviptvjargonottpaasNkechisdstb
Enwere m nsogbu a mgbe m mepere websaịtị Noobie. Achọghị m iche na onye ọ bụla maara ihe mkparịta ụka nkịtị dị ka RSS pụtara. Mana n'aka nke ọzọ, achọghị m ịdepụta Syndication Ezigbo Simply oge ọ bụla m kwuru RSS. Ihe ngwọta m bụ ịmepụta ndepụta okwu na saịtị m na-akọwapụta okwu ọ bụla m na-eji na isiokwu m na blog posts. Uzo a mgbe obula m jiri acronym (ma obu okwu okwu ihe ufodu ndi mmadu agagh aghota) m na ejikota ya na nkowa okwu nke oma na saiti nkem.
Nke ahụ bụ nnukwu echiche maka saịtị ọ bụla, Patric! Ọ na-amasị m ka ị si ejikọghachi na okwu ọ bụla!
Nke a bụ ihe mere PR flaks? ezigbo flaks PR, agbanyeghị? kwesiri ighota ihe ndi bu akuko. O zughi iji regurgitate ebe ndị ahịa na-ekwu okwu na nkwupụta mgbasa ozi. Ha kwesiri ide dika onye nta akuko akwukwo, debe ozi nile di nkpa, ha deputa mkpirisi okwu na nkpuru edemede (dika FBI, CIA) na mbido ibe.
BTW, "flak" bu okwu mkparita-aka nke onye oru PR. Ọ dị ka ịkpọ onye ọkachamara kọmpụta geek ma ọ bụ nerd. Nwere ike ịbụ a-ada na-ezighị ezi aka.